January 2022 - ပညာ ပါဝါ
နိုင်ငံခြားသွားမယ် ရွှေမြန်မာတွေ ဖတ်ဖြစ်အောင် ဖတ်ထားကြနော်… နိုင်ငံခြားသွားမယ်ဆိုရင် လေယာဉ်ကို တန်အောင် ဘယ်လိုစီးကြမလဲ..?
Too Far | 31/01/2022
နိုင်ငံခြားသွားမယ် ရွှေမြန်မာတွေ ဖတ်ဖြစ်အောင် ဖတ်ထားကြနော်… နိုင်ငံခြားသွားမယ်ဆိုရင် လေယာဉ်ကို တန်အောင် ဘယ်လိုစီးကြမလဲ..? Promotion ticket ကိုရအောင်ဝယ်ပါ Check In Counterမှာ ချိုချဉ်ထားပေးထားရင် လက်တဆုပ်လောက် မသိမသာယူ အိတ်ထဲထည့်ထားပါ… လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေမှာလဲ ချိုချဉ်ရှိရင် ထပ်ယူပါ… ထွက်ခွာ စောင့်ဆိုင်းနေရာရောက်ရင် free call phone ဆီ အပြေးသွားပြီး
ကားဆရာကြီးတွေ အားလုံးသိထားရမယ့် ကား ဒက်ဘုတ် (Dashboard) ပေါ်မှာ ဆင်းတု၊ အရုပ်၊ ရေမွှေးပုလင်း ဘာတခုမှ မတင်သင့်တဲ့ အကြောင်းအရင်း..
ကားဆရာကြီးတွေ အားလုံးသိထားရမယ့် ကား ဒက်ဘုတ် (Dashboard) ပေါ်မှာ ဆင်းတု၊ အရုပ်၊ ရေမွှေးပုလင်း ဘာတခုမှ မတင်သင့်တဲ့ အကြောင်းအရင်း.. ကား ဒက်ဘုတ် (Dashboard) ပေါ်မှာ အရုပ်တွေတင်တာ ၊ ဘုရားဆင်းတုတော်တွေ တင်ကိုးကွယ်တာ ၊ အမွှေးနံ. ပုလင်းတွေ တင်တာ ၊ ဖုန်းတင်တဲ့ စင်တွေတင်တာ ၊
ရန်ကုန်တိုင်း မွန်ပြည်နယ် ကရင်ပြည်နယ် အပါအဝင် ၂၀၂၂ခုနှစ် ၂ လပိုင်း အတွင်း မြန်မာနိုင်ငံမှာ မိုးရွာမယ့်ဒေသတွေကို ပြောသမျှ ကွက်တိမှန်တဲ့ ဆရာမလေး စုစုစံ ပြောလိုက်ပါပြီ
ရန်ကုန်တိုင်း မွန်ပြည်နယ် ကရင်ပြည်နယ် အပါအဝင် ၂၀၂၂ခုနှစ် ၂ လပိုင်း အတွင်း မြန်မာနိုင်ငံမှာ မိုးရွာမယ့်ဒေသတွေကို ပြောသမျှ ကွက်တိမှန်တဲ့ ဆရာမလေး စုစုစံ ပြောလိုက်ပါပြီ ၂၀၂၂ ဖေဖော်ဝါရီလ ၆ရက်နေ့ ချင်းပြည်နယ်နှင့် စစ်ကိုင်းအထက်ပိုင်းဒေသတွေမှာ မိုးများစွာရွာသွန်းနိုင်ပါတယ်။ (ခန့်မှန်းချိန် ၃၁-၁-၂၀၂၂ မနက် ၃ နာရီ ၉ မိနစ်)
ဈေးထဲမှာ ဈေးဝယ်ရင်းကိုယ်တိုင် တွေ့လာတာပါ – သမာအာဇီဝနဲ့ဈေးရောင်းပြီး လူသတ်နေတဲ့ ဈေးသည်တွေရဲ့ လျှို့ဝှက်ချက်ကို ဖော်လိုက်ပြီ
ဈေးထဲမှာ ဈေးဝယ်ရင်းကိုယ်တိုင် တွေ့လာတာပါ – သမာအာဇီဝနဲ့ဈေးရောင်းပြီး လူသတ်နေတဲ့ ဈေးသည်တွေရဲ့ လျှို့ဝှက်ချက်ကို ဖော်လိုက်ပြီ မိသားစု လိုက် အစုလိုက် အပြုံ လိုက် အစားစာရင်း ကွယ်လွန်သွားတယ်တို့ ဘာတို့ ဆိုတာ ကျွန်မ တို့ ဖေ့ဘုတ်မှာ လည်း မြင်ဘူး တယ် ဖတ်ဘူးပါတယ် …ဒီလို မျိုး ဈေးသည်
၂၀၂၂ ခုနှစ် ဇန်နဝါရီလ (၃၁) ရက်နေ့ အတွက် ပြည်တွင်း ရွှေဈေး၊ ကမ္ဘာ့ရွှေဈေး၊ စက်သုံးဆီဈေးနှုန်း( ဇန်နဝါရီလ ၃၁ ရက်နေ့ ပေါက်ဈေးများဖြစ်ပြီးအချိန်နှင့်အမျှအပြောင်းအလဲရှိနိုင်ပါသည်။ )
၂၀၂၂ ခုနှစ် ဇန်နဝါရီလ (၃၁) ရက်နေ့ အတွက် ပြည်တွင်း ရွှေဈေး၊ ကမ္ဘာ့ရွှေဈေး၊ စက်သုံးဆီဈေးနှုန်း( ဇန်နဝါရီလ ၃၁ ရက်နေ့ ပေါက်ဈေးများဖြစ်ပြီးအချိန်နှင့်အမျှအပြောင်းအလဲရှိနိုင်ပါသည်။ ) ရန်ကုန်ဈေးကွက်အတွင်း ၁၆ ပဲရည်အခေါက်ရွှေ တကျပ်သား 1873000 ကျပ် အဖွင့်ဈေးရှိပြီး ၁၅ ပဲရည်ပြည့်စပ်ရွှေ တကျပ်သား ကို 1762800 ကျပ်ရှိပါတယ်။
ဦးသိန်းစိန် အစိုးရ ဆင်းခါနီးကာလ အဘတွေနဲ့ ပေါင်းပြီး ပြင်ဦးလွင်က မြေတဧကကို တရာကျပ်နဲ့ ဝယ်သွားတဲ့ ခရိုနီတဦး
ဦးသိန်းစိန် အစိုးရ ဆင်းခါနီးကာလ အဘတွေနဲ့ ပေါင်းပြီး ပြင်ဦးလွင်က မြေတဧကကို တရာကျပ်နဲ့ ဝယ်သွားတဲ့ ခရိုနီတဦး ပြင်ဦးလွင်က မြေတဧကကို တရာကျပ်နဲ့ ဝယ်နိုင်ပါပြီ (ဒါပေမယ့် လာဝယ်တဲ့သူက အဘနဲ့ သိတဲ့ ခရိုနီ ဖြစ်ရပါမယ်) ဦးသိန်းစိန် အစိုးရ ဆင်းခါနီးကာလ ပြင်ဦးလွင်မြို့နယ်၊ သုံးတောင်ရွာ ဧရိယာပိုင်နက်ထဲမှာရှိတဲ့မြေတွေကို (၁) ဧက
ကျောင်းသားတွေကို သမ္မတလို တန်ဖိုးထားတဲ့ အမေရိကန်နိုင်ငံက ကျောင်းကားများ… ( သမ္မတကားနဲ့ တန်းရှိပီး ခိုင်ခံ့မှုန ှုန်းကိုလဲ ရထားနဲ့တိုက် စမ်းသပ် ထားပါသေးတယ် )
ကျောင်းသားတွေကို သမ္မတလို တန်ဖိုးထားတဲ့ အမေရိကန်နိုင်ငံက ကျောင်းကားများ… ( သမ္မတကားနဲ့ တန်းရှိပီး ခိုင်ခံ့မှုန ှုန်းကိုလဲ ရထားနဲ့တိုက် စမ်းသပ် ထားပါသေးတယ် ) Truck car ကို အခြေခံထားပီး တည်ဆောက်ထားသည့် Tank car တစ်စီးလို ခိုင်ခံ့ အကြမ်းခံပါတယ်.. ရိုးရိုးကားထက် အဆလေးဆယ် ပိုမာကျောပီး ဆီတိုင်ကီ
ကိုယ့်အတွေ့အကြုံလေးကို မျှဝေပေးပါရစေ.. ထမင်းပေါင်းအိုးနဲ့ ချက်တဲ့ ထမင်းကို မသိုးပဲ ကြာရှည် အထားခံအောင် လုပ်နည်း..
Too Far | 30/01/2022
ကိုယ့်အတွေ့အကြုံလေးကို မျှဝေပေးပါရစေ.. ထမင်းပေါင်းအိုးနဲ့ ချက်တဲ့ ထမင်းကို မသိုးပဲ ကြာရှည် အထားခံအောင် လုပ်နည်း.. ထမင်းပေါင်းအိုးနဲ့ချက်တိုင်း သိုးလွယ်လို့ မသိုးအောင် ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုပြီး မေးတာ‌တွေ့လို့.. ကိုယ့်အတွေ့အကြုံလေးကို မျှဝေပေးပါရစေ.. ကိုယ်လည်းအဲ့ဒုက္ခကို တော်တော်ခံစားခဲ့ရတာ ဘယ်လောက်ဆိုးသလဲဆို မနက်ပိုင်းချက်ထားတဲ့ထမင်းကို ညနေမမှောင်ခင် အပြေအလွှားစားမှ မှီတယ်.. မဟုတ်ရင် စားခါနီးကျ ထမင်းကသိုးရော.. အဲ့လိုဖြစ်ပေါင်းများလို့ ခေါင်းဆွဲပြုတ်နဲ့
သက်တမ်းပြည့်သွားတဲ့ သမ္မတကို ရာထူးက မဆင်းဘဲ နောက်ထပ် (၇) နှစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်ဖို့ တနိုင်ငံလုံးက ဝိုင်းတောင်းပန်ရတဲ့ အဖြစ် (မအလ လို့ထင်နေတာလား …ဆုတောင်း…)
သက်တမ်းပြည့်သွားတဲ့ သမ္မတကို ရာထူးက မဆင်းဘဲ နောက်ထပ် (၇) နှစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်ဖို့ တနိုင်ငံလုံးက ဝိုင်းတောင်းပန်ရတဲ့ အဖြစ် (မအလ လို့ထင်နေတာလား …ဆုတောင်း…) အီတလီနိုင်ငံသမ္မတကြီး Sergio Mattarella ဟာ သမ္မတရာထူးမှာ (၇) နှစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်ပြီးနောက် နောက်ထပ် သက်တမ်းမတိုးဖို့ ဆုံးဖြတ်ထားတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် သူ့နေရာကို ဆက်ခံမယ့် နိုင်ငံအတွက်
၂၀၂၂ ခုနှစ် ဇန်နဝါရီလ (၃၀) ရက်နေ့ အတွက် ပြည်တွင်း ရွှေဈေး၊ ကမ္ဘာ့ရွှေဈေး၊ စက်သုံးဆီဈေးနှုန်းများ ( ဇန်နဝါရီလ ၃၀ ရက်နေ့ ပေါက်ဈေးများဖြစ်ပြီးအချိန်နှင့်အမျှအပြောင်းအလဲရှိနိုင်ပါသည် )
၂၀၂၂ ခုနှစ် ဇန်နဝါရီလ (၃၀) ရက်နေ့ အတွက် ပြည်တွင်း ရွှေဈေး၊ ကမ္ဘာ့ရွှေဈေး၊ စက်သုံးဆီဈေးနှုန်းများ ( ဇန်နဝါရီလ ၃၀ ရက်နေ့ ပေါက်ဈေးများဖြစ်ပြီးအချိန်နှင့်အမျှအပြောင်းအလဲရှိနိုင်ပါသည် ) ရန်ကုန်ဈေးကွက်အတွင်း ၁၆ ပဲရည်အခေါက်ရွှေ တကျပ်သား 1872000 ကျပ် အဖွင့်ဈေးရှိပြီး ၁၅ ပဲရည်ပြည့်စပ်ရွှေ တကျပ်သား ကို 1761900